Taxanaha 870JD Jet Dragon® Dredge - Ellicott Dredges
Taxanaha 870JD Jet Dragon® Dredge
Taxanaha 870JD Jet Dragon® waa qoto dheer oo qoto dheer oo qotodheer oo loo adeegsado helitaanka ciidda iyo qalabka kale ee qoto dheer ee qoto dheer. Qalabkan adag, la isku halleyn karo, iyo midka la qaadi karo wuxuu ka kooban yahay laba biyood nozzles mashiinka wax lagu gooyo si loo nadiifiyo dhoobada ama looga fogeeyo qalabka kale qalabka wax lagu jaro iyada oo aan lagu soo faragelin gacanta.
Aad loogu qaadi karo gawaarida xamuulka ah ee tagaya dhulka gudaha ah.
Nidaamka xakamaynta ku saleysan PLC ee heer-farshaxan.
Caawinta bamka diyaaraduhu wuxuu u oggolaanayaa sicirka waxsoosaarka sareeya ee codsiyada qodista qoto dheer iyada oo aan la helin dhibaatooyinka bamka salaanka
Adeegsiga caadiga ah waxaa ka mid ah carrada iyo xoqidda quruurux, qodista dhulka dib u soo celinta, iyo codsiyada qandaraasleyda yaryar.
Qiyaasta dheecaanka: 14 ″ x 14 ″ (350 mm x 350 mm)
Mashruuca Matooraha Main Caterpillar C-18: 575 HP (431 kW)
Mashiinka Kaaliyaha C-13: 385 HP (289 kW)
Awoodda Quwada - Quwada: 100 HP (75 kW)
Qoto Dheerida Ugu Badan: 60 ′ (18.2 m)
Qalabka dharka lagu xiro ee loo yaqaan 'Stern winch kit'
Xakamee kuleylka kuleylka iyo qaboojiyaha